Jimmy Simouri Mbola maniry handrafitra ny Barea
Azo lazaina ho mamiratra ao anatin’ny fifaninanana reunioney eo amin’ny taranja baolina kitra, divizionina voalohany, ankehitriny ny lohalaharana Malagasy, Jimmy
Atletisma iraisam-pirenena Nofoanana ny « semi-marathon et le marathon de Paris 2020 »
Rehefa nampisalasala be ihany nandritra ny fotoana maro dia fantatra tamin’ny fanambarana navoakan’ny ASO tamin’ny fomba ofisialy omaly alarobia fa nofoanana noho ny mbola fihanaky ny Covid 19 ny
Basket 3 x 3 Foana ny Fiadina ny tompon-dakan'ny Afrika
Noho ny valan’aretina Covid 19 dia nanapa-kevitra ny mpampiantrano sy ny manampahefana ao Ouganda fa hofoanana ny fifaninanana basekety
Rugby Nitohy ny fampiofanana ampitain-davitra
Mitohy hatrany ny fiofanana rugby ampitain-davitra ataon'ireo teknisianina eo anivon’ny Rugby_Afrique izay tarihan'Atoa Adama_Bakhoum sy
Basket en Fauteuil Roulant Hiofana ireo mpitsara Malagasy
Hisy fampiofanana ampitain-davitra « Fomation en ligne pour le basket en fauteuil roulannt » karakarain’ny
Baolina kitra Malagasy Nodimandry i Jousseaume
Misaona indray ny tontolon’ny baolina kitra Malagasy indrindra ny mpitia baolina kitra any Toliara manokana fa nodimandry ny zokibe Jousseaume mpilalao vodilaharana fahiny tao amin’ny USFT “Union Sportive des Fonctionnaires de
Tafiditra tao anatin’izany, ohatra, ny fitadiavana izay ho tompon’andraikitra amin’ny lafiny serasera sy ny haivarotra. Teo koa ny fiantsoana ireo orinasa liana amin’izay resaka fampiakanjoana ny ekipam-pirenena izay indray. Natsangana ny komisionina manokana hitily sy hijery ny kalitaon’ireo fanamiana vokarin’ireo orinasa liana amin’izany ary hatreto izany dia orinasa miisa 3 no hanaovana tombana. Eo ny orinasa ERREA, MACRON, Le cercle by TED. Aorian’ny fitsirihana rehetra dia hivory ireo komity hanapahana izay orinasa ho fidiana. Ampahafantarina amin’ny rehetra kosa izany. hoy hatrany ny FMF, amin’ny fotoanany ka dia mangataka ny faharetan’ny rehetra. Tsara ny mampahatsiahy fa ny 17 aprily izao no tapitra ny fifanarahana amin’ny orinasa nampiakanjo ny Barea teo aloha dia ny orinasa Italianina, Garman, izany.